चुनावले चिन्ते रोग ल्याउँदै- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
चुनावले चिन्ते रोग ल्याउँदै
कार्तिक २३, २०७४ अतुल मिश्र
यसले मानसिक समस्याका रोगीसमेत थपिन सक्ने जोखिम देखिएको छ । विशेषज्ञका अनुसार चुनावअघि, चुनावताका मात्र नभएर चुनावको परिणामपछि समेत निर्वाचनले गर्दा तनावमा अत्यधिक वृद्धि हुने गरेको छ ।
हालको चुनावी प्रक्रियामा संलग्न थुप्रै व्यक्तिले मानसिक तनावको सामना गरिरहनुपरेको छ । उम्मेदवार, निजका आफन्त, साथी, समर्थकलगायतमा निर्वाचन चिन्ते रोगको कारण बनिरहेको वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ प्रा.डा. विद्यादेव शर्माले बताए । चुनावले मानसिक स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावबारे विकसित मुलुकमा अध्ययनहरू भए पनि नेपालमा हालसम्म यस्तो अध्ययन भएको छैन ।
‘अन्य मुलुकमा गरिएको अध्ययन र हाम्रो अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने हालको निर्वाचनले मानसिक असन्तुलन बढाइरहेको छ,’ मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. निराकारमान श्रेष्ठले भने, ‘मकहाँ समेत चुनावी तनावले गर्दा उपचारात्मक सल्लाह, सुझावका लागि नेताहरू आउने क्रम हाल बढेको छ ।’ नेता मात्र नभएर कार्यकर्तामा समेत चुनावी माहोलले तनाव बढेको जनाउँदै उनले भने, ‘कति जना त औषधिको मात्रा बढाउनका लागि समेत आउने गरेका छन् ।’
हाल निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवार, पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले दबाब र तनावका कारण पर्याप्त निद्रा लिन पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा निद्राका लागि समेत मदिराको उपयोग हुन थाल्ने देखिएको छ । एक प्रमुख दलका नेताले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै चुनावी तनावलाई कम गर्न र निद्राका लागि राति सुत्ने बेलामा मदिरा सेवन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्वीकार गरे । ‘एकाबिहानैदेखि तारन्तार फोन आउने, सबैका कुरा सुन्नुपर्ने, जितका लागि रणनीति बनाउनुपर्ने र मथिंगल खियानुपर्ने बाध्यता छ । न खाने टुंगो छ, न सुत्ने,’ उनले भने, ‘राति १२/१ बजेसम्म फुर्सदै हुँदैन ।’ उनले थपे, ‘म मात्र होइन हाल सबैजसो दलका नेता–कार्यकर्ताको दिनचर्या यस्तै छ ।’
विज्ञका अनुसार दिनहुँ मदिरा सेवनले तनाव र डिप्रेसनको सम्भावना बढाउँछ । मदिरा सेवन गर्दाताका मानसिक रोगको औषधिले समेत काम गर्दैन । ‘निर्वाचनमा प्रत्यक्ष रूपमा सरिक भएकामा न्यूनतम ६ घण्टाको निद्रा नपुग्नु र मदिरा सेवन बढ्नुले थप मानसिक समस्या निम्त्याइरहेको छ,’ डा.शर्माले भने । उनका अनुसार चुनावी युद्घमा जितको सपना बोकेका उम्मेदवार र उनका समर्थकको उच्च आकाक्षासँगै तनावपूर्ण दिनचर्याले शारीरिक मात्र नभएर मानसिक प्रणालीसमेत गडबड हुने गरेको छ ।
विशेषज्ञका अनुसार तनावको प्रभाव व्यक्ति विशेषमा फरक–फरक देखिन्छ । कोही सामान्य दबाबमा समेत धेरै तनाव लिने हुन्छन् । चुनावले गर्दा मानसिक तनाव बढ्ने गरेको अवस्थामा यसको सामना गर्न नसक्दा यसले रोगको स्वरूप लिन सक्ने औंल्याउँदै डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तनावको सामना गर्ने क्षमता हरेक व्यक्तिमा फरक–फरक हुन्छ, कोही सानो कुराले पनि विचलित हुन्छन् भने कसैले जस्तोसुकै ठूलो कुराको समेत सामना गर्छन् ।’ निर्वाचनले पार्न सक्ने नकारात्मक मानसिक प्रभाव कम गर्न विज्ञहरूले चुनावलाई सहज रूपमा एउटा स्वस्थकर खेल जस्तै लिनुपर्ने बताएका छन् । आफूले सक्दो प्रयास गर्ने तर जस्तोसुकै परिणामलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न तयार भएर यो खेलमा उत्रिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
विज्ञहरूले चुनावी अभियानमा सरिक नेतादेखि कार्यकर्तासम्मलाई सकेसम्म मदिरा सेवन नगर्न, राति न्यूनतम ६ घण्टा सुत्न, ढिलो राति गरिने गतिविधि नगर्न, राति फोन आफू नजिक नराख्न, चुनावी अभियानमा हिँडदा पनि पानीको बोतल साथै राख्न र पर्याप्त पानी पिउन, ठीक समयमा स्वस्थ खाना/खाजा खान सुझाव दिएका छन् । बिहान–बेलुका योग, ध्यान आदिले समेत मानसिक स्वास्थ्यलाई सबल बनाउने र चुनावी तनावलाई कम गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७४ १३:११
रौतहटको एक बस्तीको अधिकांशमा डेंगु लागेको आशंका
सात जनालाई डेंगु लागेको पुष्टि
कार्तिक २३, २०७४ पवन यादव
रौतहट — रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका १ पौराई बजार टोलको एक बस्तीमा डेंगुले महामारीको रुप लिएको छ । बस्ती नै महामारीको चपेटामा परेको स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीले बताए । एक साताअघि डेंगुको कारण सोही बस्तीका ३१ वर्षीय मोतिलाल गोलेको मृत्यु भएको थियो ।
रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका १ पौराई बजार टोलको एक बस्तीमा डेंगुले महामारीको रुप लिएको छ ।
बस्ती नै महामारीको चपेटामा परेको स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीले बताए । एक साताअघि डेंगुको कारण सोही बस्तीका ३१ वर्षीय मोतिलाल गोलेको मृत्यु भएको थियो ।
ज्वरोले थलिएका उनलाई भरतपुर उपचारको लागि लगिएको थियो । उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको हो । अस्पतालका चिकित्सकले डेंगुको कारण गोलेको मृत्यु भएको पुष्टी गरेपछि गाउँले चिन्तित छन् ।
करिब तीनसय परिवारको बसोवास रहेको उक्त सुकुम्वासी बस्तीका प्रत्येक घरमा एकदेखि तीनजना मानिसमा बिरामी भएको स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी राजेश साहले जानकारी दिए ।
‘बस्ती अधिकांश मानिस बिरामी परेका छन्,’ उनले भने, ‘धेरैमा डेंगुको लक्षण देखिएको छ । बस्तीलाई जोगाउन स्वास्थ्यकर्मीको विशेष टोली गाउँमा खटिनुपर्छ ।’
डेंगुको प्रकोप कम गर्न आफूले सक्दो प्रयास गरेको तर त्यो पर्याप्त नहुँने उनले बताए ।
यो पनि पढ्नुहाेस्--
डेंगु के हाे र यसकाे लक्षण र उपचार केके हुन् ?
पौराई स्वास्थ्य चौकीकी प्रमुख पूजा श्रेष्ठका अनुसार बस्तीका सात जनालाई डेंगु लागेको पुष्टी भइसकेको छ । बस्तीका अधिकांश मानिसमा ज्वरो आउनेजस्ता समस्या देखिएकाले उनीहरुमा पनि डेंगु लागेको आशंका गरिएको हो ।
स्थानीय रामबाबु चौधरी, उनकी श्रीमति, छोरा गरी एकै परिवारका तीन जनामा डेंगु लागेको स्वास्थ्य परीक्षणबाट पुष्टी भइसकेको उनले बताइन । त्यस्तै, सोही बस्तीकी मैया थापा र उनकी छोरीमा डुेंगु देखिएको उनले जानकारी दिइन् ।
बस्तीका अधिकांश परिवारका सदस्यलाई उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, मांशपेसी दुख्नेलगायतका लक्षण देखापरेको उनले बताइन् ।
बस्तीमा डेंगुको प्रकोप फैलिएपछि डेंगु फैलाउने लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्ने काम तीन दिनदेखि सुरु गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रौतहटका भेक्टर कन्ट्रोलर नन्देश्वर चौधरीले बताए ।
‘लार्भा नष्ट गर्न हामी सबै स्वास्थ्यकर्मीहरु खटिएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसको खोजीमा पुरै बस्ती चहार्न सुरु गरेका छौं ।’ यहाका बिरामीको जाचको लागि १ सय थान डेंगु जाँच गर्ने किट माग गरिएको उनले बताए ।